बुधबार, मंसिर १७, २०७७ ११:३८:१२ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
नेपाल प्रहरीको एआईजीमा पोख्रेल सिफारिश, महानिरीक्षक बन्न मार्गप्रशस्त
नेकपा सचिवालय बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्दै
ओलीलाई सरकारबाट फिर्ताको निर्णय गराउने प्रचण्डको रणनीति
माईतीघरमा राजावादीहरुको बृहत्त प्रदर्शन
ओलीलाई छाड्न लगाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने गरी सहमति निकाल्न पूर्व एमाले नेताहरु सक्रिय
कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पार्टी खोल्न सुझाव
बुधबार, कात्तिक ५, २०७७ खोजतलास
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार १०७ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् ।
काठमाडौंमा २३९१, ललितपुरमा १७३ र भक्तपुरमा ५४३ गरी ३ हजार १०७ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ लाख ४४ हजार ८७२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ७४३ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख ४४ हजार ८७२ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए ।
४४ हजार ४७४ कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् । यस्तै मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा १४ हजार ६७६ जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा २० हजार ८ सय जना छन् । यस्तै क्वारेन्टाइनमा ४ हजार ६५ जना रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा २० हजार ११८ नमूनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । बुधबार २९ सय ९६ जनाले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या ९९ हजार ६०५ पुगेको छ ।
आइसीयूमा २६९ र ८७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । नेपालमा कोरोनाबाट ७९१ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार मात्रै २६ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ५, २०७७, १६:५१:००
बैठकमै ओली र प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोप ५ घण्टा पहिले
खोई जोखिम भत्ता ? २३ घण्टा पहिले